Netwọk mmekọrịta isii iji nọrọ n'efu na ụwa | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | ulo, Atụmatụ
Ahazila m njem ikpeazụ m site na Airbnb ma ruo ugbu a enwebeghị m ahụmịhe ọjọọ. Achọpụtara m na ọ dị ọnụ ala karịa ụlọ nkwari akụ na n'obodo ụfọdụ, ọnụ ụlọ ahụ na-efu ihe dị ka ụlọ mbikọ, mana ha bụ ndị nwe onwe ha na onwe ha. Ma tupu nke a ewu ewu njem nleta mgbazinye enwere ndị ọzọ maka ndị njem mmefu ego.
Ana m ekwu maka Couchsurfing, n'ezie, mana ka oge na-aga saịtị ndị ọzọ yitere dịka Staydu, itylọ Ọrụ Ọbịa, Global Freeloaders ma ọ bụ Hitchhikers. Ha niile bụ saịtị ndị mba ọzọ na nke ọ bụla nwere isi ihe dị mma na nke na-adịghị mma. Nwaleela otu? Ọ bụrụ na ọ bụghị ma na ị na-eche dị ka njem na-enweghị okodu nke ukwuu ego bụ ezigbo nhọrọ. Ka anyị hụ onye dabara na njem gị.
3 Itylọ Ọrụ Ọbịa
4 Ndị na-akwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ
5 Nachi Wiki
Echiche nke netwọkụ mmekọrịta a ka ndị njem ga-eji maka mmefu ego chọrọ ịnọ, njem ma soro ndị si n'akụkụ ụwa niile nọrọ. Bụrụ maka ọrụ, ego ma ọ bụ n'efu. Ọ bụ mmụọ nke mgbanwe omenala na-akpali ya ọ bụ obere obodo. Denye aha na njem ahụ malitere.
Na saịtị ahụ awade iche iche nke ulo ya mere ị nwere ike ịhọrọ ịnọ n'efu, nọrọ n'ọrụ afọ ofufo na ụfọdụ ọrụ ma ọ bụ nzukọ ma ọ bụ daa ma nọrọ otu abalị. O nweghi nnukwu nchekwa data ma dekọtakwa ụfọdụ mkpesa banyere oge ọ na-ewe iji zaghachi ajụjụ. The website bụ yi na anya mfe ma na eziokwu mgbe ị na-amalite na-eme nchọgharị na ị na-aghọta na ozi bụ kwa oke doro anya na enweghi ihe ndi no n'oge a di nkpa mgbe ha na acho nyocha.
Ana m ekwu maka nzacha iji mee nyocha anyị site na ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa ma ọ bụ onye ọbịa, dịka ọmụmaatụ. Nchọgharị ahụ ga-adịtụ ntakịrị maka na ị ga-agụrịrị profaịlụ na rịba ama, ma ọ bụ n'akwụkwọ ma ọ bụ n'uche, uru ma ọ bụ njedebe nke onye ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, ị debanyere aha na ị nwere ihe ùgwù iji bụrụ akụkụ nke obodo, ikike ndị ahụ na-abawanye ma ọ bụrụ na ị na-ekerechi òkè anya site na ịhapụ echiche, nyocha ma ọ bụ biputere isiokwu maka ndị ọzọ.
Ọ gaghị ekwe omume na ugbu a anyị amaghị netwọkụ mmekọrịta a n'ihi ọ bụ mgbanwe mgbe ọ pụtara na ahịa weebụ. O nweela mgbasa ozi karịa ndị ọzọ n'ihi ya, ọ nwere nnukwu nchekwa data (ihe dị ka nde mmadụ ise), na nkọwa na nyocha site na iri. Ọ bụ uru ma ọ gaghị ekwe omume izochi isi ihe na-adịghị mma.
Oleekwa ihe ha bụ? Ọ dị mma ebe a ha na-ewe ogologo oge iji zaghachi odikwa ka odi ka ndi ozo zuru ike. Ma ndị nke mmanụ dị mma na igwe na-arụ ọrụ ebube. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na aha ahụ na-ezo aka na sofa na ime ụlọ ọtụtụ ndị ọbịa na-enye ndị ọbịa ha ihe karịrị sofa: nzukọ, ọpụpụ otu, mgbanwe mgbanwe ọdịnala dị ukwuu yana n'ezie, ndị nwere ike iso na njem. Ọ bara uru ịnweta ozi iji mee atụmatụ nke ọma maka njem gị ma ọ bụ ọdịnihu gị, nata ihe na aro.
Ma ọ nwere ihe nnukwu ọrụ dị ka ọ dị na mbido? Mgbe ụfọdụ ee na mgbe ụfọdụ mba. Mana kama enweghi nsogbu, echere m na ọ na - arụ ọrụ dị iche iche yana na ọ bụ otu n'ime nhọrọ nnabata ọnụ ala kachasị ama ama n'ụwa enwere ọtụtụ mmadụ, ọtụtụ ndị ọbịa na-achọ ụlọ ma ọ bụghị ihe niile kpatara ya ọnụ ọgụgụ nke ndị agha abụghị otu. E nwere ndịiche n’etiti otu abụọ a.
Kedu maka weebụsaịtị na ahụmịhe onye ọrụ anyị? Ọfọn ọ bụ karịa dị mfe ojijiO nwere ihe nzacha ndị ọzọ na-eme ka ọchụchọ ahụ dị ngwa, ọ na-arụ ọrụ na maapụ yana ọ bụ ezie na ị na-eji oge gị niile achọ ihe, ihe niile na-aga.
Itylọ Ọrụ Ọbịa
Ndị obodo na-agbasi mbọ ike maka ọrụ a ụsụụ ndị agha ahụ bụ ndị na-emeghe ihe onye dị njikere mgbe niile inye aka. Echiche bụ nyere ndị njem aka n'ihe niile, nnabata, nlegharị anya, atụmatụ, wdg. Otu nwere ike isonyere n'efu ma ndị otu nwere ike ịga na profaịlụ nke ibe ha, na-ekwurịtakwa okwu, ma biputere azịza na ahụmịhe.
Ndepụta nke mba dị oke oke ma ọtụtụ ihe a na-ekwu dị mma, ọ bụ ezie na mmadụ agaghị enye otu euro mgbe ị gara na weebụsaịtị. Nwere crappy web imewe Nke ahụ na-ajụ gị ntakịrị ma na-eme ka ị nwe obi abụọ banyere ihe ị ga-ahụ mgbe mmadụ mepere gị n'akụkụ nke ọzọ nke ọnụ ụzọ ahụ. Kpọrọ ihe, achọpụtara m na ọ jọgburu onwe ya.
Ndị na-akwụ ụgwọ zuru ụwa ọnụ
Ebe a kwa imewe weebụ ada ada. Biko, onye na-ahụ maka ihe ndị a? Na XXI narị afọ! Onweghi ihe ọbụlagodi onyogho na-akpali gị inwe mmasị n'ụgbọ elu ma ọ bụ idegara mmadụ akwụkwọ. Ọ bụ isi maka inweta ebe ị ga-ada dị ka parachutist. Ma mgbe ọ dị, n'ụzọ dị mwute, ha na-ewe oge iji zaghachi. Nke ahụ na-agwa m nsogbu.
Olee otu o si aru oru? Ọ bụ usoro ngwa ngwa n'ihi na ịkwesighi ịgwa onye ọ bụla kpọrọ ihe masịrị gị ma ọ bụ n'otu n'otu. Ọbụghị naanị ị dee ozi izugbe na-akọwa ihe ịchọrọ ọtụtụ ndị ụsụụ ndị agha n'otu oge ahụ ma chere maka nzaghachi ha. Ngwa ngwa, ma o doro anya na ọ dịtụghị onye. Maka otu ihe ahụ anaghị m akwado ya n'ihi na ọ dị ka ọnụọgụ ndị otu na-arụ ọrụ adaala ọtụtụ. Ọ ka na-arụ ọrụ? Ee fọrọ nke nta.
Ọ bụ ihe a mmekota saịtị na-agba ọsọ site na obodo nke hitchhikers, hitchhiking, n'ụwa nile. A na-akọrọ ihe ọmụma na ahụmịhe nke ụzọ gasị ụwa ma ọ bụrụ na-amasị gị ụdị njem a ekwenyesiri m ike na ị ga-eleta ya. Iswa gbagwojuru anya n'oge a ịme ụdị njem a, yabụ ndụmọdụ niile bara uru.
Ndụmọdụ maka otu esi agbago ụgbọ ala na mba ọ bụla, otu esi agagharị, ebe ịkwaga, ụzọ ndị kachasị mma, ebe ha na-ebuli ọtụtụ mmadụ na ụdị ahụ ihe na mgbe hitchhiking njem dị oké mkpa. Enwere isiokwu n’asụsụ dị iche iche, Spanish gụnyere, ị mepee taabụ site na edemede: Ozi Izugbe, Ndụmọdụ Kacha Mma, Oge izizi, Nchedo, Ebee iji nweta njem ma kpọtụrụ ndị ọzọ ndị hicthhikers, ya mere e ji agwa ndị njem a n’asụsụ Bekee.
Ndị a bụ ụfọdụ nhọrọ, ọ bụghị naanị ndị, ịga n'ihu na-ejegharị na ụwa na obere ego.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » ulo » Netwọk mmekọrịta isii iji nọrọ n'efu na ụwa
5 Sardinian osimiri na-enwe na ezumike
10 ebe na-adọrọ mmasị gburugburu ụwa